Koofiyadaha Koofiyadaha iyo Warshad - Soosaarayaasha Koofiyadaha Shiinaha
Galoofyada maqaarka ee ido
Gacmo gashi Deerskin
Gacmo gashi Ilkaha & Mittens
Gashado galoofyada maqaarka adhiga
Dhallaanka mittens & kabaha
Roogagga Ilkaha & Barkimooyin
Mittens Polish ah
Mudanayaal galoofyo maqaar adhi ah ...
koofiyadaha moodada dharka maryaha
Naqshadeynta fudud. Ma jiro faahfaahin buuq leh, Koofiyaddan waxaa laga soo saaray maqaarka dhogorta wejiga ee wajiga sare leh, dhogor adag oo dhogor ku dhex leh oo u eg qaabka madaxaaga oo abuuraya dabool dabiici ah. Soo bandhigida cirif aan dhaqameed ahayn, oo ugu fiican munaasabadaha labiska ama munaasabadaha caadiga ah ● Qodobka maya: HW-023C ● 100% lambskin dhab ah ● Midab: MADOW. Clean Nadiif Wide ● Si xarrago leh oo loo qaabeeyey oo si weyn ugu habboon, Cabirka cabbirka
Koofiyadaha maqaarka ee loo yaqaan 'Unisex Leather Aviator'
Naqshadeynta moodada iyo qaab dhismeedka weyn Koofiyaddan waxaa lagu sameeyay maqaarka idaha 2-dhinac ah, Dhinaca dibedda ayaa leh dhammaystir maqaar nafa oo waara oo dhinaca gudahana waa dhogor diiran oo jilicsan oo diiran. Madaxaaga wuxuu ka dhigayaa mid diirran oo raaxo leh oo ay ka mid yihiin dhegaha, foodda iyo qoorta oo leh maqaar jiilaalka quruxda badan iyo koofiyadda dhogorta leh, Qalabka dhegaha ee diiran ee diiran oo lagu xiro garka hoostiisa, dusha sare ee taajka, ama xagga dambe, koofiyadda ugu fiican ee waxqabadka banaanka, sida barafka, barafka lagu ciyaaro, kubbadda barafka, socodka socodka, isboortiga mootada, ugaadhsiga iyo ciyaaraha kale ee xilliga qaboobaha ....
Unisex maqaar ido xiiranaya Visor koofiyadaha dhogorta jiilaalka
Naqshadeynta fudud. Ma jiro faahfaahin buuq leh, Koofiyaddan waxaa lagu sameeyay maqaarka idaha oo 2-dhinac ah, Dhinaca dibedda ayaa leh dhammaystir maqaar napa ah oo waara, dhinaca gudahana waa dhogor diiran oo jilicsan oo diiran. Suuf adag oo xiirid ah oo ku jira qaab-dhismeedka madaxaaga oo abuuraya dabool dabiici ah. Daboolaha dhagta leh ee kulul ayaa hoos loo soo rogi karaa marka lagu jiro cimilada ugu qabow. ● Qodobka maya: HW-020M ● 100% lambkin dhab ah ● Midab: Geela.labarka iyo midabada kale clean Nadiif ballaaran ● Si xarrago leh loo qaabeeyey oo si weyn u habboon, ...
Maqaarka maqaarka ee Napa oo ku wareegsan koofiyadaha
Ka samaysan maqaarka idaha ee napa merino, diiran iyo neefsasho labadaba, dhogorta idaha ayaa jilicsan oo haddana xoogan. Xadhigeeda neefta, oo u dhaqmeysa sida jaangooyaha gudaha ee dabiiciga ah, Qaabkani wuxuu leeyahay taaj qayb qotomiyey oo qaab u eg iyo faro ballaaran oo dhogor ah. ugu fiican dharka labiska ama munaasabadaha aan caadiga ahayn ee xilliga qaboobaha
koofiyadaha maqaarka adhiga ee raaxada ah
raaxo iyo heer sare ah, oo ka samaysan maqaar adhi napa merino ah, diirran oo la garaaci karo, jilicsan haddana xoog leh, Qaabkani wuxuu leeyahay hal taaj oo gabal ah iyo faro ballaadhan oo dhogor ah oo leh faahfaahinta badhanka. Dhammaan marinnada ayaa loo duljoogsaday si hagaagsan, dhammaystiran oo muuqaal ah, oo ugu fiican munaasabadaha dharka ama kuwa caadiga ah. ● Qodobka maya: HW-015N ● 100% napa Sheepskin dhab ah ● Midab: madow.barar iyo midabbo kale clean Nadiif ballaaran ● Si xarrago leh loo qaabeeyey oo si weyn u habboon, Qiimaha cabbirka
Koofiyadaha jiilaalka ee loo yaqaan 'Sheepskin trapper trapper'
Koofiyada saxda ah ee loo yaqaan 'unisex hat trapper', ayaa la sameeyay 100% dhab ah laba wajiile oo tayo sare leh. taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha dabiiciga ah ee ugu diirran ee aad xidhan karto oo aadna u adkaysi badan, Dhagaha gogosha ayaa lagu xidhi karaa dusha sare haddii aan la adeegsan. lagu xidho ama yaan la xidhin ● Midab: Tan.labarka iyo midabada kale clean Nadiif ah ● Si xarrago leh oo loo qaabeeyey oo aad u habboon, Qiimaha cabbirka
Koofiyadaha jiilaalka Sheepskin
Waxay ka kooban tahay dhogor xiiranaya idaha, Sofe iyo adkeysi. Loogu talagalay in lagu daboolo dhegaha oo lagu xidhi karo garka hoostiisa ama madaxa. Koofiyadda maqaarka adhiga ee ujeeddooyinka badan leh, koofiyadaha dabinku waxay ku fiican yihiin inay dhegahaagu diirimaad noqdaan. ● Qodobka maya: HW-011M ● dhagta goglan ● Midabka: Geela
Koofiyadaha Sheepkin xiirista koofiyadaha jiilaalka
Koofiyaddani waxay ka kooban tahay qaabeynta koofiyadda caadiga ah, koofiyaddan waxaa loo gashan karaa siyaabo kala duwan si ay kuugu raaxeyso iyadoo aad u ekaato mid hagaagsan, muuqaalka kore iyo daboolka dhagaha waa la laaban karaa kor iyo hoosba. oo laga soosaaray maqaarka dhogorta wejiga ee dhogorta leh, dhogor qafiif ah oo ku dhex jira wasakhda qaabka madaxaaga oo abuuraya dabool dabiici ah. ugu fiican ee labbiska ama munaasabadaha caadiga ah. ● Qodobka maya: HW-010M ● visor waa la laaban karaa kor iyo hoos ● Midab: Geela.labarka iyo midabada kale clean Nadiif ballaaran ● Si xarrago leh loo qaabeeyey oo si fiican u habboon, Size cha ...
Koofiyadaha Sheepkin Koofiyadaha xiisaha leh ee Ruushka
koofiyad casri ah oo Ruush ah, Koofiyaddani waxay ka samaysan tahay 100% harag adhi oo qaro weyn oo diirran oo leh suede dibedda ah oo waara. Naqshadeynta fudud. Ma jiro faahfaahin buuq leh oo Wanaagsan oo loogu talagalay nooca banaanka ● Qodobka maya: HW-008M ● Midabka: Geela
koofiyadaha maqaarka dhogorta adhiga ah waxay leeyihiin suun maqaar ah
Koofiyaddan waxaa laga soo saaray maqaar adhi oo laba weji leh, dhogor qafiif ah oo dhoobada ku dhex jira ilaa qaabka madaxaaga u abuuraya dabool dabiici ah. Naqshadeynta fudud. Ma jiro faahfaahin buuq leh, cloche-ga waxoogaa yar ee gubanaya wuxuu ku siinayaa qoraal xarrago leh dharkaaga xilliga qaboobaha. Soo bandhigida daraf aan caadi ahayn, u dhigma suunka maqaarka, sidoo kale waa la joojin karaa. isku dhafan oo qumman, ugu fiican dharka labiska ama munaasabadaha aan caadiga ahayn. ● Qodobka maya: HW-007M ● 100% maqaarka dhabta ah ● Midabka: Geela.labarka iyo midabada kale clean Nadiif ballaaran ● ...
Koofiyadaha maqaarka dhogorta leh ee raaxada leh oo leh dhogor si faahfaahsan u jar
Ka samaysan nooc iyo lambara maqaar diiran, oo jilicsan oo adkeysi leh. Fiilooyinkiisu way neefsadaan, iyagoo u dhaqmaya sida heerkulbeeg dabiici ah oo jirkaaga ah. Naqshaddan qaabdhismeedka ah oo leh taaj dhoobo ah oo qaab ah, oo dhogorta ka soo baxda dusha sare ee dusha sare, iyo koox ballaadhan oo sidoo kale isku dhafan oo kaamil ah, oo ugu fiican dharka ama munaasabadaha caadiga ah. ● Qodobka maya: HW-006M ● 100% maqaarka dhabta ah ● Midabka: Geela
koofiyadaha maqaarka adhiga qaaliga ah
Stylish and classical, Oo ka samaysan maqaarka adhiga ee merino, diiran oo la garaaci karo, jilicsan hadana xoogan Samee koofiyadaha neefsashada. Qaabkani wuxuu leeyahay hal taaj oo gabal ah iyo jilicsanaan jilicsan oo jilicsan, Dhamaan xargaha ayaa laga rogay nidaam wanaagsan. ugu fiican xaga labiska ama munaasabadaha aan caadiga ahayn ee xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: HW-005M ● 100% Sheepskin dhab ah ● Midab: Geela